Global Voices teny Malagasy » Manatona ny fifidianana, miatrika fanafihana na fakana an-keriny ny Pakistaney mpanao gazety na mpikatroka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jona 2018 5:47 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Saleem Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ity fifidianana ity no hanamarika ny fotoana faharoa isian'ny tetezamita (famindram-pahefana) demaokratika eo amin'ny tantaran'ny firenena. Ny tetezamita milamina voalohany dia tamin'ny taona 2013, raha natolotr'i Asif Ali Zardari ao amin'ny Pakistan People’s Party (PPP)  na Antokom-Bahoakan'i Pakistan ho an'i Nawaz Sharif ao amin'ny Pakistan Muslim League (PML-N)  na Ligin'ny Miozolomana ao Pakistan) ny fitantanana ny governemanta. Talohan'ny taona 2008, tsy nisy ny governemanta lany tamin'ny fomba demaokratika nahavita ny dimy taona fehim-potoana fiasany.
Ny 21 Jona tao Islamabad, nahita ny tranony voaroba  i Marvi Sirmed, masoivohon'i Daily Times  sady mpiaro ny zon'olombelona rehefa niverina avy namangy tany Lahore izy sy ny fianakaviany. Solosaina finday roa, smartfinday iray, pasipaoron'ny fianakaviana ary antontan-taratasy fitsangantsanganana no nalaina.
Manahiran-tsaina tanteraka, norobaina ny tranon'i @marvisirmed  masoivohon-gazety sady mpanoratra mpiantsoroka ny Daily Times Pak ao Islamabad raha tany an-kafa ry zareo no nandany ny fetin'ny Eid. Nosavasavaina daholo ny entana rehetra tao an-trano fa solosaina finday, smartfinday 1 sy dosiem-pitsangatsanganana ihany no nalain'ny mpangalatra.
Naneho ny ahiahiny tamin'ny fanafihana ny tranon'i Sirmed ny Vaomieran'ny zon'olombelona ao Pakistana  (HRCP). Tao anatin'ny fanambarana iray  natao tamin'ny 23 Jona, hoy ny Vaomiera:
Mahita koa ny fitomboan'ny fandrahonana ireo olona ao amin'ny fianakaviany ireo mpikatroka sy mpanao gazety ao Pakistan. Nanambara tao amin'ny Twitter  ilay bilaogera pakistaney Ahmad Goraya, izay mipetraka any Holandy ary fantatra amin'ny Facebook noho ny tsikera nataony tamin'ny tafika pakistaney, fa nitsidika ireo ray aman-dreniny efa antitra tamin'ny 20 Jona ny lehilahy maro avy ao amin'ny ISI sampam-pitsikilovana. Araka ny nolazain'i Goraya, “mafonja sy mazava ny baiko” hakana an-keriny sy hampijaliana ny rainy sy hanafihana ny fianakaviany, ary hampianaran-desona an'i Goraya lesona no anton'izany.
Tsy vao voalohany no tafahaona tamin'ny hery toy izany i Goraya. Tamin'ny Janoary 2017, tsy hita nandritra  ny telo herinandro i Goraya. Taorian'ny namoahana azy dia nilaza tamin'ny BBC  izy fa nifamatotra tamin'ny andrim-panjakana ireo olona naka an-keriny sy nampijaly azy.
Nanao fanambarana ampahibemaso  ny vaomiera taorian'ny tranga:
Tany am-piandohan'ity volana ity, nalaina an-keriny tao Lahore  ny mpanao gazety sady mpikatroka Gul Bukhari. Teny an-dalana ho any amin'ny Waqt TV Studio izy hanao fandaharana resadresaka izy raha nosintonin'olon-tsy fantatra.
Naneho ny fanairana noho ny fanjavonan'i Bukhari ny Committee to Protect Journalists  na Komity Mpiaro ny Mpanao gazety, fikambanana mahaleotena miasa ho fampiroboroboana ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety manerantany, ary niantso ny polisy mba hiantoka ny fiverenany haingana sy salama tsara:
Taitra ny CPJ tamin'ny tatitra fa nailaina ankeriny tao Lahore i @gulbukhari . Tokony hampiasa izay zavatra rehetra eo ampelatanany ny polisy hanao famotorana sy hiantoka ny fiverenany haingana tsy maninon-tsy maninona. Efa ampy izay voina nahazo ny mpanao gazety pakistaney izay.
Taorian'ny fanjavonana vetivety dia tafody i Bukhari  ary niresaka tamin'ny alàlan'ny Twitter naneho ny fankasitrahany ireo rehetra nifandray tanana hahasalama tsara azy tsy maninona tsy maninona ka ao anatin'izany ny namana, fianakaviana, mpiara-miasa ary mpanohana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fanaovan-gazety.
Mitombo ihany koa ny ahiahy amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny sivana an-gazety amin'izao fanatonan'ny fifidianana izao. Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay no nesorina tsy ho heno  amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena ny Geo TV an'ny Jang Group. Maro ny tonian'ny famoahan-gazety no terena hanaisotra ireo tsanganana hafa feo  tsy ho hita amin'ny gazety. Misy ireo mpanao gazety, anisan'izany i Asad Kharal , notafihana ampahibemaso noho ny fanakianana ataony ao amin'ny asa sorany.
Any Pakistan, misy ambadika politika ny tranga maro tahaka izany ary matetika dia tsy voavaha ny raharaha fanafihana ny mpanao gazety. Ao anatin'ny toe-javatra amin'izao fotoana izao, ahitana ny fanjakazakan'ny miaramila , ny tsy fisian'ny fanavaozana ny [lalàm-p]ifidianana, ny ha-iva-n'ny fahaiza-mamaky teny, ary ny fanaovana ho anjorom-bala ny hetsiky ny elatra havia, ny fikirizan'i Pakistan hiraikatra amin'ny demaokrasia dia porofon'ny fahazakan'ny firenena sy finoana ny herin'ny fifidianana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/30/122124/
 nahita ny tranony voaroba: https://www.dawn.com/news/1415427
 Vaomieran'ny zon'olombelona ao Pakistana: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Commission_of_Pakistan
 anatin'ny fanambarana iray: http://hrcp-web.org/hrcpweb/constant-bullying-of-activists-is-unacceptable-hrcp/
 Nanambara tao amin'ny Twitter: https://www.thequint.com/news/world/pakistani-blogger-alleges-isi-threatened-his-family
 tsy hita nandritra: https://www.dawn.com/news/1307195
 tamin'ny BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-39219307
 Nanameloka : http://hrcp-web.org/hrcpweb/threatening-activists-family-is-cowardly-hrcp/
 nalaina an-keriny tao Lahore: https://nation.com.pk/06-Jun-2018/gul-bokhari-abducted
 tafody i Bukhari: https://tribune.com.pk/story/1728710/1-columnist-gul-bukhari-abducted-lahore/
 nesorina tsy ho heno: https://www.dw.com/en/pakistans-geo-tv-faces-suspension-amid-claims-of-pre-election-rigging/a-43234291
 tsanganana hafa feo: https://www.dawn.com/news/1414695
 fanjakazakan'ny miaramila: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/interrogation/2017/08/historian_ayesha_jalal_reflects_on_pakistan_s_evolution_over_the_last_70.html